Muxuu ahaa kulaylkii ugu xumaa ee Isbaanish? | Saadaasha Shabakadda
Muxuu ahaa kulaylkii ugu xumaa ee Isbaanish?
Hadda oo waddanka oo dhan laga dareemay kulaylkii ugu horreeyay ee sanadka oo ay la kulantay heerkul ka badan 40 darajo, Waa wakhti ku habboon in la xusuusto wixii ahaa kulaylkii ugu xumaa ee dalkan soo maray diiwaanno.
Waxaa la yaab leh, kii ugu xumaa ee taariikhda wuxuu ahaa sanadkii hore, maadaama aysan waxba socon oo aan ka yarayn 26 maalmood. Beryahaas, meerkurigu wuxuu ku guuleystey inuu dhaafo 40 darajo meelo badan oo Isbaanish ah gaar ahaan bartamaha iyo koonfurta jasiiradda.
Mawjaddan kulaylku waxay bilaabatay Juun 27, 2015 waxayna dhammaatay Luulyo 22 ee isla sannadkaas. Muddadaas, maalintii ugu kululayd waxay ahayd 6dii Julaay oo celcelis ahaan heer kulka uu ahaa 37 darajo Celsius. Intii lagu guda jiray Luulyo 15 waxaa jiray gobolada ugu badan ee ay saameeyeen kuleylka noocan oo kale ah, oo gaaray 30. Shaki kuma jiro inay tahay kuleyl gebi ahaanba aan caadi aheyn tan iyo markii rikoorkii hore la qabtay 2003dii 10 maalmood. muddada
Mawjaddii kuleylka caanka ahayd ee sanadkii la soo dhaafay waxay ka dhigan tahay in gobollo badan oo juqraafiga Isbaanishka ah, ay ka soo gaareen heer kulka runti cabbudhinta maalmo badan oo xiriir ah. Xaqiiqdaas waxaa sababi kara isbedelka cimilada iyo kuleylka adduunka ee meeraha oo dhan la kulmaya. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray aagag Isbaanish ah oo kuleylka laga dareemay heer aad u yar, sida ku dhacday Galicia, Asturias iyo Basque Country.
Waa inaan sugnaa inta ka harsan xagaaga si aan u ogaanno inay jiraan hirar kale oo kuleyl ah iyo inta ay yihiin. Sida laga soo xigtay khubarada saadaasha hawada, heerkulka guud ahaan Isbaanishku la il daran yahay waa wax caadi ah xilliga xagaaga, markaa waa inaad isku hubisaa samir oo aad kuleylka u keentaa sida ugu macquulsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Muxuu ahaa kulaylkii ugu xumaa ee Isbaanish?
Sidee loo sameeyaa gacmo-biyoodyo?
Maxaa dhoobo roob u da’ayaa